पोस्टमार्टम गर्न लागेका व्यक्तिले हातखुट्टा चलाउन थालेपछि… : RajdhaniDaily.com sharethis
रिपोर्टअनुसार मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका श्रीकेश कुमारलाई बिहीबार राती अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनलाई अस्पताल पु-याएको केही बेरमा मृत घोषणा गरिएको थियो । भोलिपल्ट उनलाई अस्पतालको शवगृहमा रहेको एउटा फ्रिजमा राखिएको थियो ।
सो घटना’bout सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा बालाले शब देखाउँदै चिच्चाएको सुन्न सकिन्छ । ‘उहाँको मृत्यु भएको छैन् । यो कसरी भयो ? उहाँले केही भन्न खोजिरहनु भएको छ । उहाँले सास फेरिरहनु भएको छ ।,’ कुमारकी बुहारीले भनेकी छिन् ।
मोरादाबादका प्रमुख मेडिकल अधिकृत डा. शिव सिंहका अनुसार चिकित्सकले विरामीलाई भोलिपल्ट बिहान ३ बजे पनि परीक्षण गरेका थिए । त्यतिबेला बिरामीको मुटु चलेको थिएन ।
तर, उज्यालो भएपछि प्रहरीको एउटा समूह र परिवारका सदस्यहरुले उनलाई जीवितै पाएका थिए । सो घटना’bout अनुसन्धान सुरु भएको छ । सो घटना मेडिकल जगतमै ‘दुर्लभ’ भएको डा. सिंह बताउँछन् ।
४० वर्षीय कुमारको अहिले मेरुटस्थित एउटा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको छ । तर, होस भने खुलेको छैन् । लापरबाही गरेको भन्दै पीडित परिवारले अस्पतालविरुद्ध उजुरी गर्ने भएको छ ।
ओलीले घोषणा गरेको ३०१ केन्द्रीय सदस्यकाे सूची यस्ताे छ (सूचीसहित)
एमाले अध्यक्षमा केपी ओलीको मनोनयन दर्ता
अयाेग्यलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि सिफारिस गरेको भन्दै एमाले मुख्यालयमा उजुरी
सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुल्यो
नागरिक लगानी कोषले दियो १ करोड ६८ लाख कोभिड मुत्यु दाबी भुक्तानी
‘जनताले न्याय पाउने हक कुण्ठित’
प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल बारकोे अल्टिमेटम नमान्ने
म्यानचेष्टर सिटी र टोटेनहमको जित
पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन मापदण्ड बनाइयो
देउवालाई कमल थापाको जवाफ : राजालाई गाली गरेर अब शासन चल्दैन
त्यसपछि ओलीलाई बालुवाटारबाट बालकोट पुर्याइयाे : प्रचण्ड
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक चैत १ गते
मौद्रिक नीति आएपछि हल सञ्चालकमा जाग्यो आशा
हालान्डलाई रियल ल्याउने ओडेगार्डको प्रयास
कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न अपांगमैत्री पर्यटन प्रवद्र्धन आवश्यक
सडेको अवस्थामा महिलाको शव फेला
हाम्रो पार्टीमा बहस, छलफल समाजवादका लागि : प्रचण्ड